ဆငျတုပျကှေး – DVB
မမေတေယောကျမှာ ကိုယျတိုငျထကျ ဘဘေီလေးကို စိတျပူတာက မမေရေဲ့ မတ်ေတာလို့ပဲ ပွောရမလား။ ကိုယျဝနျရှိလာပွီဆိုတာနဲ့ မမေတှေကေ ကိုယျ့အတှကျထကျ ဘဘေီလေးအတှကျ ပိုတှေးမိနတေတျကွပါတယျ။ ဖြားရငျတောငျ ဘဘေီလေးကို ထိခိုကျသှားမှာစိုးလို့ဆိုပွီး ဆေးမသောကျဘဲ နတောမြိုးလေ။ အခုဗခါကျတော့ မိုးနဲ့အတူ မဖိတျချေါဘဲေ ရောကျလာတဲ့ ဆငျတုပျကှေး ကိုယျဝနျဆောငျမမေေ ကူးစကျခံရရငျ ဘာတှဖွေဈလာနိုငျလဲဆိုတာကို ပွောပွပေးပါရစေ။ ကိုယျဝနျဆောငျမမေေ ဆငျတုပျကှေး ကူးစကျခံရရငျ ဘဘေီလေးကို ထိခိုကျနိုငျလား…….. ပုံမှနျအားဖွငျ့ကတော့ ဆငျတုပျကှေးက ကိုယျဝနျဆောငျကာလအတှငျးမှာဆိုရငျ မိခငျကနေ ကလေးဆီကို ကူးစကျနိုငျခွကေ တျောတျောလေးနညျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကလေးမမှေးခငျမှာ ရောဂါပိုး ကူးစကျခံရတာဖွဈတာကွောငျ့ တခါတလမှော မမေဆေီ့ကနေ ဘဘေီလေးကို ကူးစကျနိုငျပါတယျ။ နောကျထပျ ဖွဈနိုငျခွတေခုက ကိုယျဝနျဆောငျ တတိယကာလပတျမှာ ဆငျတုပျကှေးရောဂါ ကူးစကျခံရမယျဆိုရငျ ကိုယျဝနျပကျြကနြိုငျတာပါ။ ဒါကလညျး ဖွဈခဲတာကွောငျ့ အရမျးကွီးတော့ မစိုးရိမျစခေငျြပါဘူး။ ကိုယျဝနျဆောငျကာလမှာ မမေကေ ရောဂါတခုခု ခံစားရမယျဆိုရငျ ဘဘေီလေးကို တိုကျရိုကျမဟုတျတောငျ သှယျဝိုကျတဲ့နညျးနဲ့ ထိခိုကျနိုငျပါတယျ။ ဆငျတုပျကှေးကလညျး ဒီလိုပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ဆငျတုပျကှေးကို ကိုယျဝနျဆောငျကာလ အစောပိုငျးခြိနျမှာ ခံစားရမယျဆိုရငျတော့ ဘဘေီလေးကို ထိခိုကျနိုငျခွကေ ပိုမြားနနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျမမေတှေေ အနနေဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျကာလမှာ ဆငျတုပျကှေး ကူးစကျမခံရအောငျ ကာကှယျတာက အကောငျးဆုံးဖွဈမှာပါ။ တကယျလို့ ကူးစကျခံလိုကျရမယျ ဆိုရငျလညျး အခုပွောပွတဲ့ နညျးလမျးလေးတှအေတိုငျး နထေိုငျစခေငျြပါတယျ။ ဆငျတုပျကှေးကူးစကျခံရမှုက ကိုယျဝနျဆောငျမမေတှေမှောရော အတူတူပဲလား…… ဆငျတုပျကှေးကူးစကျခံရမှုက ကိုယျဝနျဆောငျမမေတှေမှောလညျး အတူတူပါပဲ။ ရောဂါပိုး သယျဆောငျထားတဲ့ ခွငျအကိုကျခံရပွီး ၃ ရကျကနေ ၇ ရကျအတှငျး ရောဂါလက်ခဏာတှေ စပွလာနိုငျပါတယျ။ ရောဂါလက်ခဏာတှကေတော့ အခွားသူတှနေဲ့ အတူတူပါပဲ။ အဆဈနဲ့ ကွှကျသားတှေ နာကငျြမယျ ဆငျတုပျကှေးရောဂါ ကူးစကျခံရတဲ့အခါ အဆဈတှနေဲ့ ကွှကျသားတှမှော ပွငျးထနျတဲ့ နာကငျြကိုကျခဲမှုတှေ ခံစားရနိုငျပါ။ မနကျခငျးတိုငျး လကျကောကျဝတျနဲ့ တံတောငျဆဈတှမှော ပွငျးထနျတဲ့ နာကငျြမှုကို ခံစားရနိုငျပါတယျ။ ဒီနာကငျြမှုက ရကျသတ်တပတျ ၁ ပတျ ဒါမှမဟုတျ လပေါငျးမြားစှာ ကွာနိုငျပါတယျ။ အဆဈတဝိုကျမှာ ရောငျရမျးနတောမြိုးတှလေညျး ရှိနိုငျပါတယျ။ အဖြားတကျမယျ ဆငျတုပျကှေး ကူးစကျခံရတဲ့အခါ အဖြားက ၁၀၄ ဒီဂရီ ဆဲလျစီးရပျဈအထိ မွငျ့တကျသှားနိုငျပါတယျ။ ခမျြးတုနျမယျ ဆငျတုပျကှေး ကူးစကျခံရတဲ့အခါ ငှကျဖြားကူးစကျခံရသလို ခမျြးတုနျတာမြိုးကိုလညျး ခံစားရနိုငျပါတယျ။ အဖုအပိမျ့တှေ ထှကျမယျ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ နရောအနှံ့မှာ အနီရောငျ အဖုအပိမျ့တှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ခေါငျးကိုကျမယျ ဆငျတုပျကှေး ကူးစကျခံရတဲ့အခါ ပွငျးထနျစှာ ခေါငျးကိုကျတာကို ခံစားရနိုငျပါတယျ။ ခါးနာမယျ ခေါငျးကိုကျတာနဲ့အတူ ခါးနာတာမြိုးကိုလညျး ခံစားရနိုငျပါတယျ။ နုံးခြိမယျ၊ အော့အနျမယျ ဗိုကျထဲမှာ မအီမသာဖွဈပွီး အော့အနျတာမြိုးလညျး ခံစားရနိုငျပါတယျ။ ခွကေုနျလကျပမျးကမြယျ ဆငျတုပျကှေးဖွဈတဲ့အခါ အဖြားတကျတာ၊ ခေါငျးကိုကျတာ၊ အနီရောငျ အဖုအပိမျ့တှေ ထှကျတာအပွငျ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ အားမရှိသလိုဖွဈပွီး ခွကေုနျလကျပမျး ကတြာမြိုးတှေ ခံစားရနိုငျပါတယျ။ ဘယျလိုသကျသာအောငျလုပျမလဲ……. ကိုယျဝနျဆောငျမမေအေနနေဲ့ ဆငျတုပျကှေး ကူးစကျခံရတဲ့အခါ သသေခြောခြာ ဂရုစိုကျမှ မမေရေော ကလေးပါ ကနျြးမာစမှောပါ။ ပွညျ့ပွညျ့ဝဝအနားယူပါ ဆရာဝနျနဲ့ပွသပွီး လိုအပျတဲ့ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူပါ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုလုပျပါ အဆဈတှကေို ရခေဲဝတျကပျပေးပါ အကိုကျအခဲသကျသာစဖေို့ ဆားရညျစိမျပါ နာကငျြမှုနဲ့ အဖြားသကျသာစဖေို့ ကွကျသှနျဖွူစားပေးပါ နှားနို့ထဲမှာ နနှငျးထညျ့ပွီး သောကျပေးပါ ဗီတာမငျ C နဲ့ ဗီတာမငျ E ပါဝငျနတေဲ့ အစားအစာတှေ မြားမြားစားပေးပါ။ ရေးသားသူ Aye Thi Mon ဆေးပညာပိုငျးဆိုငျရာတညျးဖွတျသူ Dr. Thurein Hlaing Win ဤဆောင်းပါးကို DVB ၏ မိတ်ဘက် ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာဝက်ဘ်ဆိုဒ် hellosayarwon.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Zawgyi Version ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတို့ သိချင်နေမယ့် ဆင်တုပ်ကွေးအကြောင်း DVB မေမေတယောက်မှာ ကိုယ်တိုင်ထက် ဘေဘီလေးကို စိတ်ပူတာက မေမေ့ရဲ့ မေတ္တာလို့ပဲ ပြောရမလား။ ကိုယ်ဝန်ရှိလာပြီဆိုတာနဲ့ မေမေတွေက ကိုယ့်အတွက်ထက် ဘေဘီလေးအတွက် ပိုတွေးမိနေတတ်ကြပါတယ်။ ဖျားရင်တောင် ဘေဘီလေးကို ထိခိုက်သွားမှာစိုးလို့ဆိုပြီး ဆေးမသောက်ဘဲ နေတာမျိုးလေ။ အခုဗခါက်တော့ မိုးနဲ့အတူ မဖိတ်ခေါ်ဘဲေ ရောက်လာတဲ့ ဆင်တုပ်ကွေး ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေ ကူးစက်ခံရရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကို ပြောပြပေးပါရစေ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေ ဆင်တုပ်ကွေး ကူးစက်ခံရရင် ဘေဘီလေးကို ထိခိုက်နိုင်လား…….. ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ ဆင်တုပ်ကွေးက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်းမှာဆိုရင် မိခင်ကနေ ကလေးဆီကို ကူးစက်နိုင်ခြေက တော်တေ်ာလေးနည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးမမွေးခင်မှာ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရတာဖြစ်တာကြောင့် တခါတလေမှာ မေမေ့ဆီကနေ ဘေဘီလေးကို ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖြစ်နိုင်ခြေတခုက ကိုယ်ဝန်ဆောင် တတိယကာလပတ်မှာ ဆင်တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ခံရမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျနိုင်တာပါ။ ဒါကလည်း ဖြစ်ခဲတာကြောင့် အရမ်းကြီးတော့ မစိုးရိမ်စေချင်ပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ မေမေက ရောဂါတခုခု ခံစားရမယ်ဆိုရင် ဘေဘီလေးကို တိုက်ရိုက်မဟုတ်တောင် သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဆင်တုပ်ကွေးကလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ဆင်တုပ်ကွေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ အစောပိုင်းချိန်မှာ ခံစားရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘေဘီလေးကို ထိခိုက်နိုင်ခြေက ပိုများနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတွေ အနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ ဆင်တုပ်ကွေး ကူးစက်မခံရအောင် ကာကွယ်တာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ တကယ်လို့ ကူးစက်ခံလိုက်ရမယ် ဆိုရင်လည်း အခုပြောပြတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေအတိုင်း နေထိုင်စေချင်ပါတယ်။ ဆင်တုပ်ကွေးကူးစက်ခံရမှုက ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတွေမှာရော အတူတူပဲလား…… ဆင်တုပ်ကွေးကူးစက်ခံရမှုက ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတွေမှာလည်း အတူတူပါပဲ။ ရောဂါပိုး သယ်ဆောင်ထားတဲ့ ခြင်အကိုက်ခံရပြီး ၃ ရက်ကနေ ၇ ရက်အတွင်း ရောဂါလက္ခဏာတွေ စပြလာနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ အခြားသူတွေနဲ့ အတူတူပါပဲ။ အဆစ်နဲ့ ကြွက်သားတွေ နာကျင်မယ် ဆင်တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ခံရတဲ့အခါ အဆစ်တွေနဲ့ ကြွက်သားတွေမှာ ပြင်းထန်တဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေ ခံစားရနိုင်ပါ။ မနက်ခင်းတိုင်း လက်ကောက်ဝတ်နဲ့ တံတောင်ဆစ်တွေမှာ ပြင်းထန်တဲ့ နာကျင်မှုကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒီနာကျင်မှုက ရက်သတ္တပတ် ၁ ပတ် ဒါမှမဟုတ် လပေါင်းများစွာ ကြာနိုင်ပါတယ်။ အဆစ်တဝိုက်မှာ ရောင်ရမ်းနေတာမျိုးတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဖျားတက်မယ် ဆင်တုပ်ကွေး ကူးစက်ခံရတဲ့အခါ အဖျားက ၁၀၄ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ်အထိ မြင့်တက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ချမ်းတုန်မယ် ဆင်တုပ်ကွေး ကူးစက်ခံရတဲ့အခါ ငှက်ဖျားကူးစက်ခံရသလို ချမ်းတုန်တာမျိုးကိုလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အဖုအပိမ့်တွေ ထွက်မယ် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နေရာအနှံ့မှာ အနီရောင် အဖုအပိမ့်တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်မယ် ဆင်တုပ်ကွေး ကူးစက်ခံရတဲ့အခါ ပြင်းထန်စွာ ခေါင်းကိုက်တာကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ခါးနာမယ် ခေါင်းကိုက်တာနဲ့အတူ ခါးနာတာမျိုးကိုလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ နုံးချိမယ်၊ အော့အန်မယ် ဗိုက်ထဲမှာ မအီမသာဖြစ်ပြီး အော့အန်တာမျိုးလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ခြေကုန်လက်ပမ်းကျမယ် ဆင်တုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့အခါ အဖျားတက်တာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ အနီရောင် အဖုအပိမ့်တွေ ထွက်တာအပြင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အားမရှိသလိုဖြစ်ပြီး ခြေကုန်လက်ပမ်း ကျတာမျိုးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်မလဲ……. ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေအနေနဲ့ ဆင်တုပ်ကွေး ကူးစက်ခံရတဲ့အခါ သေသေချာချာ ဂရုစိုက်မှ မေမေရော ကလေးပါ ကျန်းမာစေမှာပါ။ ပြည့်ပြည့်ဝဝအနားယူပါ ဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီး လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူပါ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပါ အဆစ်တွေကို ရေခဲဝတ်ကပ်ပေးပါ အကိုက်အခဲသက်သာစေဖို့ ဆားရည်စိမ်ပါ နာကျင်မှုနဲ့ အဖျားသက်သာစေဖို့ ကြက်သွန်ဖြူစားပေးပါ နွားနို့ထဲမှာ နနွင်းထည့်ပြီး သောက်ပေးပါ ဗီတာမင် C နဲ့ ဗီတာမင် E ပါဝင်နေတဲ့ အစားအစာတွေ များများစားပေးပါ။ ရေးသားသူ Aye Thi Mon ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win
မိုးရာသီဆို တုပျကှေးလေးတှတေနျးစီ လို့ပွောရမလိုပဲနျော။ တုပျကှေးမြိုးစုံဖွဈကွတဲ့အထဲမှာ ဆငျတုပျကှေး(ဆငျဖွူတျောတုပျကှေးလို့လညျးချေါကွတယျ) လို့သိကွတဲ့ Chikungunya ကလညျး ခုနောကျပိုငျး နရောဝငျယူလာပါတယျ။ ခွငျတှကေလညျး ပေါလာတာကိုး။ Chikungunya ဟာ သှေးလှနျတုပျကှေးခွငျလို့သိကွတဲ့ Aedes aegypti နဲ့ Aedes albopictus ခွငျမြိုးစိတျတှကေတဆငျ့ လူတှဆေီကူးစကျတာဖွဈပါတယျ။ သှေးလှနျတုပျကှေးနဲ့ ဆငျတူတဲ့ရောဂါလညျးဖွဈပါတယျ။ လူလူခငျြးမကူးနိုငျပမေယျ့ ဒီတုပျကှေးဖွဈနသေူကို ကိုကျခဲ့တဲ့ခွငျက နောကျတဈယောကျဆီ ကူးစကျပေးတာပါ။ ဆငျတုပျကှေးဖွဈရငျ စစခငျြးမှာ ကိုယျပူတာ၊ အဆဈအမွဈတှကေိုကျခဲတာခံစားရတယျ၊ နောကျတော့ နုံးတာ၊ ကွှကျသားနာကငျြတာ၊ ခေါငျးကိုကျတာ၊ အရပွေားအနီကှကျဖွဈတာတှဖွေဈလာနိုငျပါတယျ။ ရောဂါပိုးသယျဆောငျလာတဲ့ခွငျကိုကျတာခံရပွီး ၂ ရကျကနေ ၇ ရကျအတှငျး ဆငျတုပျကှေးရဲ့ လက်ခဏာတှပေျေါလာတတျပါတယျ။ ကာကှယျဆေး မရှိ Chikungunya ဗိုငျးရပျဈအတှကျ ကာကှယျဆေးမရှိသလို သူ့အတှကျသီးသနျ့ကုသတဲ့ဆေးမရှိပါဘူး။ အခုထိုးနကွေတဲ့ ကာကှယျဆေးတှနေဲ့လညျး မကာကှယျနိုငျပါဘူးတဲ့။ ဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ဖွဈတာမို့ ပဋိဇီဝဆေးတှလေညျး သောကျလို့မထူးပါဘူး။ ဖွဈလာခဲ့ရငျ သူ့အခြိနျအတိုငျးအတာတဈခုအတှငျး သကျသာပြောကျကငျးသှားတတျပွီး နောကျဆကျတှဲပွဿနာဆိုးဆိုးတှေ ဖွဈခဲပါတယျ။ စိုးရိမျရလား အမြားစုကတော့ ၃ ရကျကနေ ၁၀ ရကျအတှငျး လက်ခဏာတှသေကျသာပြောကျကငျးသှားကွပါတယျ။ တခြို့တှမှောတော့ အဆဈနာကငျြကိုကျခဲမှုအကွှငျးအကနျြတှကေို လနဲ့ခြီ၊ နှဈနဲ့ခြီပွီး ခံစားရနိုငျပါတယျ။ Chikungunya ရဲ့နောကျဆကျတှဲပွဿနာကွောငျ့ သဆေုံးမှုဖွဈတာရှားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ နာတာရှညျရောဂါတှရှေိတဲ့ သကျကွီးပိုငျးအရှယျတှမှော တဈခါတလေ ရောဂါပိုပွငျးထနျတတျပါတယျ။ လက်ခဏာတှကေ ကူးစကျခံရတဲ့သူအမြားစုမှာ ခွငျကိုကျခံရပွီး ၃ ရကျကနေ ၇ ရကျ အကွာမှာ လက်ခဏာပွတတျပါတယျ။ အသိသာဆုံးက အဖြားတကျခွငျးနဲ့ အဆဈအမွဈနာကငျြကိုကျခဲခွငျးတို့ဖွဈပွီး ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ ကွှကျသားနာကငျြခွငျး၊ အဆဈရောငျရမျးခွငျး၊ အနီစကျ၊အနီကှကျထှကျခွငျးလက်ခဏာတှပေါဝငျပါတယျ။ လူနာအမြားစုကတော့ တဈပတျအတှငျးသကျသာသှားတတျပါတယျ။ Chikungunya က သဆေုံးတဲ့အထိ မဖွဈတတျပမေယျ့ ဂရုစိုကျကုသမှုမရှိဘဲ လက်ခဏာအရမျးပွငျးထနျရငျတော့ ဆိုးကြိုးတှရှေိပါတယျ။ ပိုပွငျးပွငျးထနျထနျခံစားရဖို့ အန်တရာယျရှိသူတှကေတော့ မှေးကငျးစအရှယျတှေ၊သကျကွီးပိုငျးအရှယျတှေ(၆၅နှဈနဲ့အထကျ)နဲ့ သှေးတိုး၊ဆီးခြို၊နှလုံးရောဂါတို့လို ရောဂါရှိသူတှပေါဝငျပါတယျ။ ကုသမှု ကုသမှုကတော့ အဖြားကဖြို့၊ အကိုကျအခဲသကျသာဖို့ ဆေးဝါးတှပေဲ ဆရာဝနျက ကုသပေးပွီး အကွံပွုခကျြတှပေေးပါလိမျ့မယျ။ မွနျမွနျသကျသာဖို့ကတော့ ဆငျခွငျနထေိုငျရမှာ ကနျြတာကိုယျ့အပိုငျးဖွဈပါတယျ။ ဘယျလိုနထေိုငျရမလဲဆိုတော့ – နားနားနနေေ နပေါ။ ရမြေားမြားသောကျပါ။ ဆရာဝနျညှနျကွားတဲ့ ဆေးကိုပဲသောကျပါ။ ကိုယျထငျရာအကိုကျအခဲပြောကျဆေး၊အဖြားကဆြေးတှမေသောကျပါနဲ့။ အာဟာရပွညျ့ဝအောငျစားပါ။ Chikungunya ဖွဈပွီးပွီဆိုလညျး ပေါ့ပေါ့ဆဆမနပေါနဲ့။ လက်ခဏာစတငျပွီး တဈပတျအတှငျးမှာခွငျထပျအကိုကျမခံရအောငျ ဂရုစိုကျပါ။ နမေကောငျးဖွဈနတေဲ့ကိုယျ့ကိုကိုကျသှားတဲ့ ခွငျကတဆငျ့ ကိုယျ့မိသားစု သို့မဟုတျ တခွားသူတှဆေီ ဆကျပွီးကူးစကျနိုငျလို့ပါ။ ကွိုတငျကာကှယျဖို့ အဓိကကတော့ ခွငျကိုကျမခံရအောငျ ကာကှယျရမှာပါပဲ။ ခွငျကိုကျမခံရအောငျ ဆိုရငျ – အင်ျကြီလကျရှညျ၊ဘောငျးဘီရှညျဝတျပါ။ လုံလုံခွုံခွုံဝတျပါ။ ခွငျဆေးလိမျးပါ။ ခွငျဆေးထှနျးပါ။ လအေေးစကျသုံးပါ သို့မဟုတျ ခွငျလုံဇကာတပျပါ။ အိမျဝနျးကငျြ ခွငျကငျးစငျဖို့ ဂရုစိုကျရှငျးလငျးပါ။ ပုံး သို့မဟုတျပနျးအိုး၊ ရပေုံးတှကေနေ ရအေသဈလဲပါ၊ ရကေနျြတှကေို သှနျပဈပါ။
ရေးသားသူ Yun Sandi Nan Mon ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win ဤဆောင်းပါးကို DVB ၏ မိတ်ဘက် ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာဝက်ဘ်ဆိုဒ် hellosayarwon.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ ---------------------------------------------------- Zawgyi Version မိုးရာသီဆို တုပ်ကွေးလေးတွေတန်းစီ လို့ပြောရမလိုပဲနော်။ တုပ်ကွေးမျိုးစုံဖြစ်ကြတဲ့အထဲမှာ ဆင်တုပ်ကွေး(ဆင်ဖြူတော်တုပ်ကွေးလို့လည်းခေါ်ကြတယ်) လို့သိကြတဲ့ Chikungunya ကလည်း ခုနောက်ပိုင်း နေရာဝင်ယူလာပါတယ်။ ခြင်တွေကလည်း ပေါလာတာကိုး။ Chikungunya ဟာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးခြင်လို့သိကြတဲ့ Aedes aegypti နဲ့ Aedes albopictus ခြင်မျိုးစိတ်တွေကတဆင့် လူတွေဆီကူးစက်တာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးနဲ့ ဆင်တူတဲ့ရောဂါလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လူလူချင်းမကူးနိုင်ပေမယ့် ဒီတုပ်ကွေးဖြစ်နေသူကို ကိုက်ခဲ့တဲ့ခြင်က နောက်တစ်ယောက်ဆီ ကူးစက်ပေးတာပါ။ ဆင်တုပ်ကွေးဖြစ်ရင် စစချင်းမှာ ကိုယ်ပူတာ၊ အဆစ်အမြစ်တွေကိုက်ခဲတာခံစားရတယ်၊ နောက်တော့ နုံးတာ၊ ကြွက်သားနာကျင်တာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ အရေပြားအနီကွက်ဖြစ်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်လာတဲ့ခြင်ကိုက်တာခံရပြီး ၂ ရက်ကနေ ၇ ရက်အတွင်း ဆင်တုပ်ကွေးရဲ့ လက္ခဏာတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေး မရှိ Chikungunya ဗိုင်းရပ်စ်အတွက် ကာကွယ်ဆေးမရှိသလို သူ့အတွက်သီးသန့်ကုသတဲ့ဆေးမရှိပါဘူး။ အခုထိုးနေကြတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့လည်း မကာကွယ်နိုင်ပါဘူးတဲ့။ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တာမို့ ပဋိဇီဝဆေးတွေလည်း သောက်လို့မထူးပါဘူး။ ဖြစ်လာခဲ့ရင် သူ့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း သက်သာပျောက်ကင်းသွားတတ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲပြဿနာဆိုးဆိုးတွေ ဖြစ်ခဲပါတယ်။ စိုးရိမ်ရလား အများစုကတော့ ၃ ရက်ကနေ ၁၀ ရက်အတွင်း လက္ခဏာတွေသက်သာပျောက်ကင်းသွားကြပါတယ်။ တချို့တွေမှာတော့ အဆစ်နာကျင်ကိုက်ခဲမှုအကြွင်းအကျန်တွေကို လနဲ့ချီ၊ နှစ်နဲ့ချီပြီး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ Chikungunya ရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာကြောင့် သေဆုံးမှုဖြစ်တာရှားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နာတာရှည်ရောဂါတွေရှိတဲ့ သက်ကြီးပိုင်းအရွယ်တွေမှာ တစ်ခါတလေ ရောဂါပိုပြင်းထန်တတ်ပါတယ်။ လက္ခဏာတွေက ကူးစက်ခံရတဲ့သူအများစုမှာ ခြင်ကိုက်ခံရပြီး ၃ ရက်ကနေ ၇ ရက် အကြာမှာ လက္ခဏာပြတတ်ပါတယ်။ အသိသာဆုံးက အဖျားတက်ခြင်းနဲ့ အဆစ်အမြစ်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတို့ဖြစ်ပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း၊ အဆစ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အနီစက်၊အနီကွက်ထွက်ခြင်းလက္ခဏာတွေပါဝင်ပါတယ်။ လူနာအများစုကတော့ တစ်ပတ်အတွင်းသက်သာသွားတတ်ပါတယ်။ Chikungunya က သေဆုံးတဲ့အထိ မဖြစ်တတ်ပေမယ့် ဂရုစိုက်ကုသမှုမရှိဘဲ လက္ခဏာအရမ်းပြင်းထန်ရင်တော့ ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။ ပိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရဖို့ အန္တရာယ်ရှိသူတွေကတော့ မွေးကင်းစအရွယ်တွေ၊သက်ကြီးပိုင်းအရွယ်တွေ(၆၅နှစ်နဲ့အထက်)နဲ့ သွေးတိုး၊ဆီးချို၊နှလုံးရောဂါတို့လို ရောဂါရှိသူတွေပါဝင်ပါတယ်။ ကုသမှု ကုသမှုကတော့ အဖျားကျဖို့၊ အကိုက်အခဲသက်သာဖို့ ဆေးဝါးတွေပဲ ဆရာဝန်က ကုသပေးပြီး အကြံပြုချက်တွေပေးပါလိမ့်မယ်။ မြန်မြန်သက်သာဖို့ကတော့ ဆင်ခြင်နေထိုင်ရမှာ ကျန်တာကိုယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတော့ – နားနားနေနေ နေပါ။ ရေများများသောက်ပါ။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ ဆေးကိုပဲသောက်ပါ။ ကိုယ်ထင်ရာအကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊အဖျားကျဆေးတွေမသောက်ပါနဲ့။ အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားပါ။ Chikungunya ဖြစ်ပြီးပြီဆိုလည်း ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေပါနဲ့။ လက္ခဏာစတင်ပြီး တစ်ပတ်အတွင်းမှာခြင်ထပ်အကိုက်မခံရအောင် ဂရုစိုက်ပါ။ နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်ကိုကိုက်သွားတဲ့ ခြင်ကတဆင့် ကိုယ့်မိသားစု သို့မဟုတ် တခြားသူတွေဆီ ဆက်ပြီးကူးစက်နိုင်လို့ပါ။ ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ အဓိကကတော့ ခြင်ကိုက်မခံရအောင် ကာကွယ်ရမှာပါပဲ။ ခြင်ကိုက်မခံရအောင် ဆိုရင် – အင်္ကျီလက်ရှည်၊ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်ပါ။ လုံလုံခြုံခြုံဝတ်ပါ။ ခြင်ဆေးလိမ်းပါ။ ခြင်ဆေးထွန်းပါ။ လေအေးစက်သုံးပါ သို့မဟုတ် ခြင်လုံဇကာတပ်ပါ။ အိမ်ဝန်းကျင် ခြင်ကင်းစင်ဖို့ ဂရုစိုက်ရှင်းလင်းပါ။ ပုံး သို့မဟုတ်ပန်းအိုး၊ ရေပုံးတွေကနေ ရေအသစ်လဲပါ၊ ရေကျန်တွေကို သွန်ပစ်ပါ။